Maitiro Anokosha Kubva kuSemalt: Ungagadzirisa Sei Social Media Advertising Up Kuti Ubudirire
Hapana munhu anokwanisa kupikisa chokwadi chokuti huwandu hwemagariro evanhu ndiyo nharaunda yakanakisisa iyo iyo marikisi inogona kusvika kune Z zera (Generation) uye mireniyari. Muzvokwadi, 95% yevanhu vakuru vose vezera iri pakati pe18 ne 34 vane mikana yekufunga kubva kutengesi inogamuchirwa pamusangano wevanhu vanoshandisa.
Kana zvasvika pakushambadzira, iwe unogona kugara uchifunga nezvekubhadharwa kwemashoko ekudhinda. Iyo inopa kudzoka kwakakura pakutsvaga nemari shoma. Izvi zvinokonzera kuverenga kwakanaka kwekambani duku nepamapepanhau pamwe nekutanga zvisingambove nemari yemari yekugadzira chikwata chikuru.
Nezvo izvi mupfungwa, Julia Vashneva, nyanzvi inotungamirira kubva ku Semalt , Digital Services, rinotarisa mazano ekuti iwe unowana zvakanyanya sei kubva pasi-bhajheji yehuwandu hwemagariro evanhu
Ita mamwe maedzo
Muchikwata chemauto, mune chimwe chinhu chinonzi aggressive scouting - handheld temperature scanner. Iyi ndiyo nzira iyo batetali inotumira boka duku kuti rikure muvengi. Iwe unogona kushandisa kurwisana nechisimba mumushandirapamwe wako, asi panzvimbo pokutumira mauto, iwe unenge uchibayira zvinhu zvako. Nokuisa mari yako mumasangano akasiyana, unosvika pakuona kuti ndiani ari nani ROI.
Sarudza yakakodzera mitambo
Mapoka akasiyana-siyana ane maitiro akasiyana evanhu. Somuenzaniso, vechidiki vari pakati pemakore 25 kusvika ku34 vanoshandisa Facebook kakawanda..Izvi zvinongoratidzira 29.7% chete yevashandisi vose. Zvinofadza kuti vashandisi vepa Facebook vanowanzova nevakadzi vane 77% avo vanoshandisa nzvimbo iyo vachienzanisa ne 66% yevarume vose.
Kana ukaunza YouTube mukati mifananidzo, zvadaro zvinyorwa zvakasiyana. Pano vakadzi vanongorondedzera 38% yevashandi nevamwe vose zviri pachena kuti varume. Uyezve, zvinopfuura 50% zvemaonero ose zvakaitwa pahwendefa kana chipangizo chechigadziri chinoita kuti chive chakanaka chekutarisa vashandi vanoshandisa mafaira.
Nezviwero izvi zvose iwe ungashamiswa kuona kuti 9% chete yeSMBs vanoshandisa hupenyu hwemagariro kuratidza marashi avo. Sezvo zvakadaro, unogona kuwana muganhu pamusoro pekupedzwa nechinhu chiri nyore.
Tsvaga nguva yakakodzera yekugovera zvayo
Zvino sezvo iwe wakaziva waunenge uchitsvaga, zvakakosha kuti uone nguva yakakodzera yekugovera zvayo. Dzimwe nyanzvi dzinokurudzira kuti iwe unofanira kuzviita imwe nguva mukati mevheekisi pakati pe1 ne3. Kana zvasvika kune Twitter nguva iyo yakasiyana - tweeps inoshanda pakati pe 9 mangwanani uye 3 masikati.
Dzidza kuti ungaronga sei
Kunyange zvazvo zvingave zvakaoma kuziva kana mitambo yako iri kushanda nekuda kwemazuva akasiyana-siyana pamwe nezvimwe zvikonzero, haungambofi zvakakanganisika kana iwe ukaronga zvinyorwa zvako zvakakwana. Tora kadhi rekunyorera uye uzvitsaurire kuronga matweet yako, blogs, mavhidhiyo uye chero ipi zvayo inokosha. Iwe unogona kutongedza nzira yacho uchishandisa plug ins.
Nezvose zvinenge zviripo, kubudirira kwehutano hwako hwemagariro evanhu kunowedzera kune chimwe chinhu - hutano hwehuwandu hwakatumirwa. Usaodza mwoyo. Nyora zvinyorwa zvinowedzera kukosha kune zvaunotarisira uye zvekukohwa kwevatengi; chimwe chinhu chavanenge vakamanikidzwa kugovana.